Izikolo eIraq- ALinks
Inkqubo yeMfundo yase-Iraq ilawulwa ngurhulumente welizwe wase-Iraq. Le mfundo karhulumente inikezelwa simahla ukusuka kwiPrayimari ukuya kwizidanga zobuGqirha. Amaziko emfundo abucala akhona kwaye iindleko zezikolo ziwenza angathandeki kuninzi lwabemi. Owona mtsalane uphambili yinkululeko kunye nokunqongophala kolawulo ngurhulumente wase-Iraq kunye nokuvumela abafundi ukuba benze isigqibo malunga nesifundo kunye nekhondo lomsebenzi bangathanda ukukhetha.
Imfundo ye-Iraq: iMfundo yaphambi kweprayimari
Izikolo zaseprayimari zikhonza abantwana abaneminyaka yobudala emi-4 ukuya kweli-5.
IMfundo ye-Iraq: Isikolo samabanga aphantsi
Abafundi bafanelekile baneminyaka emi-6. Esi sikolo sinamabakala ama-6. Ukugqithela kuviwo kunye nokufumana iSatifikethi sePrayimari kubenza bafaneleke ukuya kwiSikolo esiPhakathi.
Le nkqubo yemfundo ibandezeleka ngenxa yeemeko zoqoqosho ezinzima.
Kukhokelela ekubeni abazali bangabathumeli abantwana babo esikolweni okanye abantwana abayeke isikolo besebancinci. Ngapha koko, kukho nokudideka phakathi kootitshala ngenxa yemivuzo yabo ephantsi. Ukunqongophala kweencwadi zezifundo kunye nonxibelelwano olungelulo phakathi kootitshala nabazali.
Kwinkqubo yemfundo e-Iraq abafundi emva koko baya kwiSikolo esiPhakathi, kumabanga 7 ukuya ku-9. Ukugqitywa kwebanga le-9, abafundi banika uViwo lweSizwe lweSizwe eliPhakathi le-Baccalaureate. Xa bedlulile kolu vavanyo abafundi banokungena kwisikolo somsebenzi.
Ezinye izikolo zase-Iraq zibandakanya kuphela inqanaba eliphakathi. Kwaye ngenxa yoko abafundi kuya kufuneka bayigqibe imfundo yokulungiselela kwesinye isikolo. Uninzi lwezikolo zombini zinamanqanaba aphakathi kunye namabanga aphezulu.
Izikolo zasesekondari ziqala kwibanga le-10-12. Kukho iindidi ezimbini zeZikolo zeSekondari- Jikelele kunye nezeMisebenzi.
Abafundi baya kwiSekondari ukusuka kumaBakala 10-12. Zimbini iintlobo zeZikolo eziziiSekondari: Ngokubanzi kunye noQeqesho. Izikolo ngokubanzi zibonelela ngemfundo efanelekileyo. Kukho amasebe amathathu ezikolo: ezoLimo, ezoShishino kunye noRhwebo.
Ukutyelela eIraq? Kufuneka uye kwezi ndawo !!
Isikhokelo semfundo saseRussia
Disemba 28, 2019
Inkqubo yemfundo: Palestina